Covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည်စီးပွားရေးကို ပို၍ ပင်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စေနိုင်သည်၊ - WorldRef
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည်စီးပွားရေးကို ပို၍ ပင်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စေနိုင်သည်၊
ကိုဗစ် 19ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းQ & A
မတ်လ 1st, 2021
ဂလိုဘယ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ နယ်နိမိတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပconflictsိပက္ခများသည်နိုင်ငံများအတွင်းသို့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆက်ပြတ်နေသည်။ သို့သော် Princeton မှ Harold James က Covid-19 သည်ငါတို့အားလုံးကိုပိုမိုနီးကပ်စွာတွန်းအားပေးနိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။
Q&A - စီးပွားရေးသမိုင်းပညာရှင် Harold James Eryn Brown မှဖြစ်သည်
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ပြန်လည်စတင်: အကျပ်အတည်း & ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏သိပ္ပံတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု၊ ယင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်ရှေ့ဆက်လမ်းကိုမည်သို့ရှာဖွေနေသည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေဆဲဖြစ်သည်။ Reset ကို Alfred P. Sloan Foundation မှထောက်ပံ့မှုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ဟယ်ရယ်လ်ဂျိမ်းစ်သည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်၎င်း၏မျှော်လင့်ထားသည့်နိဂုံးချုပ်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ Princeton တက္ကသိုလ်မှစီးပွားရေးသမိုင်းပညာရှင်သည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များ၏မဟာစီးပွားပျက်ကပ်မှသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်ပြိုလဲခြင်းအထိဘဏ္crာရေးအကျပ်အတည်းများ၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။
သူ၏ ၂၀၀၂ ခုနှစ်စာအုပ်၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏အဆုံးမဟာစီးပွားပျက်ကပ်ကြီးသည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုမည်သို့အရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့သည်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါနိုင်ငံများအနေဖြင့်နိုင်ငံရပ်ခြားမှယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးဆက်နွယ်မှုများကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများအားဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုဆန့်ကျင်သောအင်အားစုများသည် ၂၁ ရာစုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကုန်သွယ်ရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်နည်းပညာတို့မှတဆင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်သွယ်မှုများတည်ဆောက်ထားသော်လည်း၊ "စိတ်ကျရောဂါ၏သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်မူလကပင်အားနည်းချက်ဖြစ်ပြီးကူးစက်ရောဂါများ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ကွဲပြားသောအကျပ်အတည်းများကြောင့်ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်" ဟုသူကယနေ့ပြောကြားသည်။
အမှန်မှာ၊ တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင်ဂျိမ်းစ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်“ မတူညီသောအကျပ်အတည်းများ” ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အိမ်ခြံမြေနှင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များပြိုလဲသောအခါ၊ နိုင်ငံရေးသမားများသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကိုစော်ကားခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးများကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဂျိမ်းစ်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် ဘဏ္Financialာရေးစီးပွားရေးနှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်, အထူးပြissueနာနှင့်ညီလာခံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ။ ဒီဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းရန်သူတွေဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ သူကမှတ်ချက်ချသည်မှာ - ကုန်သွယ်မှုနှုန်းသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနောက်ကွယ်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်၊ သို့သော်ငွေကြေးနှင့်လူများသည်တိုင်းပြည်များအကြားလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနေခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးကိုဂရုတစိုက်လေ့လာသူများက Covid-2020 သည်အမှီအခိုကင်းမှု၏အမှောင်ဘက်ဖြစ်သောဗိုင်းရတ် RNA နည်းနည်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းသည်ပြန်လည်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေသောတန်ပြန်မှုအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်စေမည်လောဟုတွေးမိသည်။ လိုအပ်သောဆေးနှင့်ဆေးထိုးပြတ်လပ်မှုများကြောင့်တိုင်းပြည်များသည်ရှေး ဦး စွာမိမိတို့၏ပြည်သူများကိုဂရုစိုက်ရန် ၀ င် ရောက်၍ တရုတ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယမှယခင်ကဝယ်ယူခဲ့သောဆေးပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်စည်းရုံးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံသားများစွာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသဖြင့်အစိုးရများသည်အိမ်နှင့်နီးသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို“ မကျေမနပ်ဖြစ်နေ” ကြမည်မဟုတ်လော။
ဆန့်ကျင်တွင်ဂျိမ်းစ်ကပြောပါတယ်; ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။ ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာကြီးကိုမည်သို့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုအသေအချာပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောခန့်မှန်းသူများထင်မြင်ယူဆသည်မှာဆိုးဝါးလှသည့်နည်းမဟုတ်ပါ။ ဂျိမ်းစ်နှင့်စကားပြောခဲ့သည် သိ Covid သည်ကမ္ဘာကြီးကိုချဲ့ထွင်ရန်မဟုတ်ဘဲပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုကုန်ပစ္စည်းများ၊ လူများနှင့်အရင်းအနှီးများ၏ရွေ့လျားမှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးမှာပါ ၀ င်မှုကအတွေးအမြင်ဆိုင်ရာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကိုအတူတကွချိတ်ဆက်နေတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကရောမအင်ပါယာအတွင်းအီတလီတောင်ပိုင်းတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သောလူများ၏အရိုးစုများသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ အာရှ DNA ကို.
အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်အဆင့်အသစ်များရှိခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်အစောပိုင်းကာလတွင်ရွက်လွှင့်သင်္ဘောများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကပိုမိုဝေးဝေးခရီးထွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉ ရာစုတွင်ရထားလမ်းများသည်တိုက်ကြီးများ၏အတွင်းပိုင်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုတွင်လေယာဉ်ပျံနှင့်နောက်ပိုင်းအင်တာနက်တို့သည်ဒေသသစ်များသို့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်းအတွက်ကောင်းသောအရာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိ၊ သို့သော်လည်းငါသည်သင်ကတခြားနေရာတစ်နေရာမှသာရနိုင်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုရယူတစ်ခုကိစ္စပဲထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သိလိုစိတ်ကိုလည်းမေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြန်လည်စတင်လိုသည်။ အခြားသူများနှင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဒုက္ခသည်များကထွက်ပြေးလာကြသူများ၊
၁၉၂၀ နှင့် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်အတွေးအခေါ်၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်၏ Whampoa စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကယ်ဒမီမှဗိုလ်လောင်းများက၎င်းတို့သည်ဖက်ဆစ်ပါတီတစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းအီတလီကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရင်းအနှီးများကမ္ဘာအနှံ့လှုပ်ရှားမှုသည် ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းအထိမရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ယူအက်စ်ပေါင်နှံမှုဈေးကွက်ပြိုလဲသွားခြင်းကဲ့သို့ပင်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏ဘဏ်အကျပ်အတည်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါ၏အ 2018 ပြန်လည်သုံးသပ်မှာတော့ငါ 2008 ပြန်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် deglobalization - ကုန်ပစ္စည်းများ, လူများ၏, မြို့တော်နှင့်အချက်အလက်များ၏။ ငါတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ဒီအထောက်အထားကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အယူအဆကိုအပြည့်အဝမထောက်ခံဘူးဆိုတာပဲ။
ဒါကြောင့်ကောလာဟလများ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏အဆုံး အလွန်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းပါပြီ။
အခြားလူများက“ slobalization” စသည့်ကြွေးကြော်သံများကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ငါနင့်လိုပဲထင်တယ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းသည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုဆန့်ကျင်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်မကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလုပ်ဆောင်နေသည့်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဆွေးနွေးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ လူအများစုကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပြီးဆုံးသွားပြီဟုထင်မြင်ယူဆကြသော်လည်းလက်တွေ့အခြေအနေများမှာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရေးပconflictsိပက္ခများပိုမိုများပြားလာသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုပိုမိုခုခံနိုင်ခဲ့သည်။ ဘဏ္systemsာရေးစနစ်ကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းမှု၊ အထူးသဖြင့်ဥရောပ၌ရှိသည်။
ကုန်သွယ်မှုပုံစံများပြောင်းလဲသွားပြီးထုတ်လုပ်မှုအချို့သည်အိမ်သို့ပိုမိုနီးကပ်လာသည်။ ၎င်းသည်များစွာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အနည်းငယ်သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ခေတ်မီမြန်သောဖက်ရှင်စတိုင်များသည်အာရှဒေသနှင့်မဝေးလျှင်ဒေသအလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတင်ပို့နိုင်သည်။ အနည်းငယ်သောအမေရိကန်ထုတ်လုပ်မှုသည်အမေရိကန်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ အချို့သောဥရောပထုတ်လုပ်မှုများသည်ဥရောပအရှေ့တောင်ဘက်သို့ - တရုတ်မဟုတ်ဘဲရိုမေးနီးယားသို့မဟုတ်ယူကရိန်းသို့သွားသည်။ ၎င်းသည်အသံအတိုးအကျယ်အရကြီးမားသောအရာမဟုတ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ငါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝါဒ၏အဓိကအတိုက်အခံမျှဝေသော 2016 Trump ရွေးကောက်ပွဲနှင့် Brexit, နှစ် ဦး စလုံးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖို့တန်ပြန်၏ဇာတ်ကြောင်းသို့ fit ထင်ပါတယ်။ သို့သော် ၂၀၂၀ အထိ၎င်းသည်မည်သည့်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုအလွန်ကွဲပြားသောပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မှာရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်ပြီ။
ဟုတ်တယ်။ Trump အကြံပေးအပါအဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ, များစွာသောလူ ပတေရုသ Navarroဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် Covid အကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမူလအပြစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် Coronavirus ကိုပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာများတွင် - အီတလီမြောက်ပိုင်း၊ နယူးယောက်စီးတီးတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားအပြစ်တင်ဖို့လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ဆေးဝါးအတွက်ဝေးလံသောထုတ်လုပ်သူများအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်ဤအကျပ်အတည်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်ဟုလည်းတွေးမိသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောစာရင်းအင်းတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များကိုတရုတ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယတွင်ပြုလုပ်သည်၊ သို့မဟုတ်တရုတ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပတ်ပတ်လည် အမေရိကန်ပantibိဇီဝဆေး၏ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဥပမာအားဖြင့်တရုတ်မှဖြစ်သည်။
Covid ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်လူများ၏တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားလာခြင်းအပေါ်ကြီးမားသောကန့်သတ်ချက်များထွက်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုပိုမိုခက်ခဲစေခဲ့သည်။ ဒီတော့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ရှုထောင့်သည်အသစ်သောဖိစီးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးအကောင်းမြင်တဲ့ပုံလည်းရှိတယ်။ Covid ၏အကျပ်အတည်းသည်နည်းပညာအပြောင်းအလဲအမြောက်အများ - အထူးသဖြင့်အင်တာနက်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်အချို့သည်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုအမှန်တကယ်တိုးပွားစေသည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအကြောင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုပါပဲ။
ဟောင်ကောင်ရှိ Kwai Tsing ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းအပေါ်အပေါ်အမြင် Getty Images
ဒီတော့ lockdowns ကိုဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလို့ထင်လား။
အိုးအိမ်၊ ပညာရေးနှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယခုအချိန်အထိဒေသခံများဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သောစျေးကြီးသည့်ဘဝကဏ္ areas သုံးခုကိုစဉ်းစားပါ။ Coronavirus ပြcrisisနာအတွင်းမှာသုံးယောက်စလုံးဟာတကယ့်အန္တရာယ်တွေကိုစတင်ခဲ့တယ် - လူအများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သင့်ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံသို့သွားခြင်း၊
Covid ကဒီသုံးခုလုံးကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသားနယ်နိမိတ်များသည်သိသာထင်ရှားသည့်ကန့်သတ်ချက်များမဟုတ်တော့ပါ။
စျေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့ကြီးပြကြီးများဟာသူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုဆုံးရှုံးနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ မင်းဟာမန်ဟက်တန်အလယ်မှာဒါမှမဟုတ်လန်ဒန်ရဲ့အလယ်မှာနေစရာမလိုဘူး။ သငျသညျပိုမိုသာယာသောနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာနထေိုငျနှင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးတစ်လကိုရက်အနည်းငယ်လောက်နေရာတစ်ခုမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူပေါင်းများစွာကိုမြင်ရတော့မှာပါ။ မျိုးစပ်ပုံစံတစ်မျိုး။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်တွင်အဖျား ရှိ၍ မခံစားနိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်နှင့်သွားတွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆရာ ၀ န်ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုဖြင့်ဖြစ်စေပြောဆိုနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်သွေးသကြားဓာတ်ကိုတိုင်းတာသောကိရိယာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ထံလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သူသို့မဟုတ်သူမသည်ငါနေထိုင်သောနယူးဂျာစီတွင်ရှိစရာမလိုပါ။
ကျောင်း။ Zoom သည်အရာရာတိုင်းအတွက်အဖြေဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းလွန်ခဲ့သောခြောက်လကအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သောပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံများအပါအ ၀ င်အချို့သောအရာများကပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ Princeton ၌စာရင်းသွင်းထားသည့်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားများသည်ဂျကာတာရှိ၊ Buenos Aires နှင့်ဘာလင်ရှိကွန်ပျူတာများတွင်ထိုင်နေကြသည်။ အနာဂတ်၌ပညာရေးသည်ဝေးလံသောအစည်းအဝေးများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးများနှင့်ပေါင်းစပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျောင်းသားများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကောလိပ်တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အခြေခံစီးပွားရေးပုံစံပျက်နေပြီဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေကြသည်။
“ Covid ရဲ့အကြပ်အတည်းကနည်းပညာအပြောင်းအလဲအမြောက်အမြားရှိနေတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အချိန်မှာရောက်လာနေပြီးအချို့ကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုအမှန်တကယ်တိုးပွားစေတယ်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအကြောင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုပါပဲ” Harold ဂျိမ်းစ်
ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ဖယ်ရှားပစ်မှုလျှော့ချရေးဇာတ်ကြောင်းပဲ။ ငါဖြည့်စွက်သင့်သည်။ နေ့တိုင်းလူတွေဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာအချက်အလက်တွေပိုပိုပြီးလွှဲပြောင်းကြတယ်။ Zoom ကိုလုပ်တဲ့အခါမယုံနိုင်လောက်အောင်များစွာသော bytes တွေကိုရွေ့လျားနေပါတယ်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု၏မက်ထရစ်ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကော။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို“ မကျေမနပ်ဖြစ်နေခြင်း” အကြောင်းများစွာပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဲဒါဖြစ်လာပြီလား
ဟုတ်တယ်။ ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များသည်သိသာထင်ရှားသည့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုသည်ပြည်တွင်း၌တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်တခြားနေရာတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအပေါ်မူတည်နေတုန်းပဲ။ အထိရောက်ဆုံး Covid ကာကွယ်ဆေးအတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲသည်ကမ္ဘာတစ်လွှား - တရုတ်၊ ရုရှား၊ ဥရောပ၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဖြစ်သည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကအခြားတွေထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါကစံပြဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်ဆေးကိုဒေသအလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါမည်လား။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ဒါပေမယ့်ဥရောပတိုင်းပြည်တိုင်းမှာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အက်စတိုးနီးယားနှင့်ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံများတွင်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤအချက်သည်အခြားလိုအပ်ချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံများအကြားညီမျှစွာဖြန့်ဝေနိုင်ရန်သေချာစေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်းကတည်ဆောက်ခဲ့သောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏အုတ်မြစ်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောနိုင်ငံစုံချဉ်းကပ်မှုအတွက်ဝယ်လိုအားရှိလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးသည်အခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဘဏ္financialာရေးအကျပ်အတည်းအပြီး၌နိုင်ငံများသည်အတွင်းဘက်သို့လှည့ ်၍ လူကြိုက်များသောနိုင်ငံရေးကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ Covid-2008 ကဒီတက်တမ်းလိုက်ပါတယ် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏စိတ်ပညာ မင်းခေါ်တာလား
ငါတကယ်ရောထွေးနေတယ်ထင်တယ် ချက်ချင်းစိတ်ပညာသည်အမှန်တကယ်ပင်စဉ်းစားရန်လိုသည်၊ ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုမပြုလုပ်ကြစို့နှင့်။ ဒါကကူးစက်ရောဂါကရှင်းနေတာပဲ။
သို့သော်ကျန်းမာရေးနှင့်စီးပွားရေးတို့၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကိုသင်စတင်ကြည့်ရှုသောအခါဆွေးနွေးမှုသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ “ America First” ဟုပြောခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်တကယ်တော့အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များသည်သာယာသောဥပမာဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အမေရိကန်သည်ဤကုန်ပစ္စည်းများအတွက်နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အပေါ်မှီခိုနေရဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်အတော်အတန်မှီခိုနေရဖွယ်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ညီမျှသောကုန်ပစ္စည်းများကိုမိမိဘာသာထုတ်လုပ်နိုင်လျှင်ပင်အနာဂတ်တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများမှမိမိကိုယ်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။
သမိုင်းပညာရှင်များသတိထားမိသောတကယ့်ကြီးမားသောကူးစက်ရောဂါနှစ်ခုမှာ ၆ နှင့် ၇ ရာစုများတွင်ဂျတ်စတီးနီးယားပလိပ်နှင့် Black Death - အထူးသဖြင့်လူမည်းသေခြင်း၏ပထမအကြိမ်၊ ၁၃၄၈ မှ ၁၃၅၀ မှ ၁၃၅၁ အထိဖြစ်သည်။ ဥရောပလူ ဦး ရေ၏လေးပုံတစ်ပုံမှတစ်ဝက်ခန့်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရောမအင်ပါယာ၏ပြိုလဲခြင်းနှင့်ပြိုကွဲခြင်းဇာတ်လမ်းတွင်အခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောအင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Black Death သည်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ဥရောပတွင်လူ ဦး ရေအလွန်များပြားသည့်လက္ခဏာများပြသသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပြီးမဖြစ်စလောက်မြေများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်၊ အထွက်နှုန်းကျဆင်းလာခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာများပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးလုပ်ခများလည်းကျဆင်းလာသည်။ ဥရောပသားသုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သောလူမည်းသေခြင်း၏ရုတ်တရက်အပြီးတွင်အမှန်တကယ်တွင်လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်လူတို့သည်အခြားအရာများကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ပြီးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုကြီးမားစွာပန်းပွင့်စေခဲ့သည်။
Covid ကူးစက်ရောဂါသည်ဤရောဂါကူးစက်မှု၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါ၊ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ခုကစပိန်တုပ်ကွေးအတွင်းသေဆုံးမှုသည်သန်း ၅၀ အထိရှိသည်။ ထိုမျှပင်လုပ်အားခအဆင့်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မလောက်ဘူး။
ဘာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း နှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Covid လေတိုက်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကိုသင်စောင့်ကြည့်မလဲ။
မြို့ကြီးတွေဆီကနေဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နည်းပညာနဲ့နည်းပညာအသုံးချမှုတွေကိုပညာရေးနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ လူများသည်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပိုမိုပေးဆပ်နေပါက၎င်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံ ၀ င်ငွေနှင့်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်ကဘေးဥပဒ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ခုကိုရနိုင်သည် - ဝယ်ယူမှုစွမ်းအားတိုးလာခြင်းဖြင့်လူတို့အားစိတ်သက်သာစေသည်။
Covid သည်သမားရိုးကျငွေကြေးများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုများအရှိန်အဟုန်ကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။ နေရာတော်တော်များများမှာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ငွေစက္ကူများထပ်မံမယူလိုကြပါ။ ဥရောပဗဟိုဘဏ်ကကြီးကြီးမားမားကြေငြာလိုက်သည် e- ငွေကြေးလေ့လာမှု.
အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်ပေးသည့်ငွေများသည်လည်းပုဂ္ဂလိကငွေကြေးများအားမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငွေကြေးနှင့်ပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သောဟောင်းနွမ်းသောကမ္ဘာသည်ကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေတ်မှီသောငွေများကိုတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်အရှိန်မြှင့်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအကျပ်အတည်းသည်အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်လူကြိုက်များမှုတို့၏အားကောင်းသောမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လူထုကြိုက်အစိုးရများသည် Covid အကျပ်အတည်းကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လူထုကြိုက်မဲလန်းဂန်း၏အချို့သောအချက်များမှာကျွမ်းကျင်သူများအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏မူဝါဒများသည်များသောအားဖြင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ဂျာမနီလိုအရည်အချင်းရှိတဲ့အစိုးရတွေကတော့ဒီအကျပ်အတည်းကိုကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကလူစုလူဝေးအပေါ်အစိုးရတွေအပေါ်တိုင်တန်းချက်တွေကမှားနေတယ်။
ဒါကြောင့် Covid ကလူကြိုက်များမှုကိုနှိမ်နင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဆိုပါရေနွေးငွေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုထဲကသွားခဲ့သည်။
မှ ပို. reset - ကမ္ဘာသည် coronavirus ကူးစက်ရောဂါ၊ ၎င်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်ရှေ့ဆက်လမ်းကိုကမ္ဘာသို့မည်သို့သွားနေကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာနေဆဲဖြစ်သည်။
10.1146 / knowable-110420-1
Eryn ဘရောင်း Los Angeles ရှိစာရေးဆရာနှင့်အယ်ဒီတာဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည်မူလ၌ထင်ရှားသည် သိတတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းနှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်များမှလွတ်လပ်သောသတင်းစာပညာကြိုးပမ်းမှု။ စာရင်းသွင်းပါ သတင်းလွှာ.
ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအမြင်များသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ပြီး WorldRef ၏အမြင်များ၊ ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်ပေါ်လစီများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်မည်သို့ပြုလုပ်နေသည်ကိုလေ့လာရန် WorldRef ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလေ့လာပါ။
ရောင်းချသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဝယ်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | အခမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်း | လူအင်အားန်ဆောင်မှုများ | စက်မှုဖြေရှင်းချက်များ | သတ္တုတွင်းနှင့်တွင်းထွက်ထုတ်ယူခြင်း | ပစ္စည်းကိုင်တွယ်စနစ်များ | ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြေရှင်းနည်းများ | ဘဏ္withာရေးနှင့်အတူပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပါဝါ Solutions
WinSights ကိုသင်၏ inbox ထဲတွင်ရယူပါ။
ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူ Morris Chang တို့၏ဇာတ်လမ်း။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 'စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ' မှေးမှိန်နေသောစီးပွားရေး
B19B ရောင်းချခြင်းပုံစံများပေါ်တွင် Covid-2 ၏ကြာရှည်သက်ရောက်မှု